June Again (2021) – Gold Channel Movies
A mother's love is unforgettableMay. 06, 2021Australia99 Min.Not Rated
ဒီတစ်ခါမှာတော့ June Again(2021) ဇာတ်ကားကောင်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးဟာဆိုရင် IMDb 7.7/10 အထိရရှိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်ရှုသူတွေသဘောကျနှစ်သက်စေမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာဆိုရင် စီးပွားရေးကြပ်တည်းပြီး ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေကို စိတ်ရောဂါဝေဒနာစားနေရတဲ့ကြားက ရအောင်ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရားကြီးမားပုံကို မြင်တွေ့ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဂျွန်ဝီလ်တန်ဟာ လေဖြတ်ဝေဒနာအကြီးအကျယ်ခံစားရပြီးတဲ့နောက် စိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာကိုပါ ခံစားနေရရှာတယ်။ သူ့သားသမီးတွေက သူ့ကိုစိတ်ရောဂါသည်တွေထားတဲ့ ဂေဟာတစ်ခုမှာပို့ထားကြတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဂျွန်ဟာ သူ့မိသားစုအကြောင်းတွေ စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုပြန်သတိရသွားခဲ့တယ်။ သူ့အိမ်ကိုပြန်ချင်တဲ့အကြောင်းပြောပေမယ့်လည်း ဆရာဝန်ကပေးမပြန်ခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ သူမဟာဂေဟာကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့တော့တယ်။
ဂျွန်ဟာ သူ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူမပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးကို သူ့သမီးကရောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်း သိသွားရှာတယ်။ သူ့သားကလည်း မိတ္တူဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ်ဝင်လုပ်နေတယ်။ သမီးဖြစ်သူကလည်း သူမဦးစီးလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့စက်ရုံကြီးကို တစ်ခြားတစ်ယောက်ဆီလွှဲပြောင်းပစ်လိုက်တယ်။ မိသားစုအရေးရော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရောအားလုံးပျက်ဆီးယိုယွင်းနေတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဂျွန်အရမ်းစိတ်ပျက်အားငယ်သွားခဲ့တယ်။ ဒီအခြေအနေအားလုံးကို ဂျွန်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ? သားသမီးတွေကရော ဂျွန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာအောင် လိုက်လုပ်ပေးမလား? ဂျွန်နဲ့မဆုံစည်းလိုက်ရတဲ့ ဂျွန်ရဲ့ချစ်သူ ဒန်နီရယ်နဲ့ဘယ်လိုပြန်တွေ့ကြမလဲ?ဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှူလိုက်ကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ
IMDb Rating 7.8 135 votes